Ihe mgbochi mmiri: Gịnị bụ ugwo ịkwụ ụgwọ na olee otú ị ga-esi zere ya?
Ụgwọ ịkwụ ụgwọ na-ezo aka n'ụdị ọ bụla nke iwu na-akwadoghị ma ọ bụ ụgha nke onye omekome cyber mere. The scammer na-enweta data nkeonwe, ego, na akụkụ ndị ọzọ nke mmasị site na onye ahụ.
Oliver King, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ọrụ nke Ọkachamara , na-enye echiche ndị dị oké ọnụ ahịa nke ga - enyere gị aka imegide mwakpo weebụ.
Ndị na-esonụ bụ ụzọ ndị e si akwụ ụgwọ nkwụ ụgwọ:
Ahịa ma ọ bụ furu efu
Ngalaba na-akwadoghị ma ọ bụ nke aghụghọ - vichy dercos shampooing anti-chute.
Bounced ma ọ bụ weghachite ego nyocha, rịọrọ ụgha maka nkwụghachi.
Ụlọ ọrụ E-azụmahịa na-adabere na azụmahịa azụmahịa iji rịọ ụgwọ n'aka ndị ahịa. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọnụọgụgụ nke azụmahịa eletrik emeela ka ọ dịkwuo ọtụtụ ihe omume aghụghọ.
Ụdị ịkwụ ụgwọ ego dị iche iche gụnyere:
Ọ bụla ịntanetị nke chọrọ data nkeonwe dị ka akaụntụ akụ ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ nọ n'ihe ize ndụ nke ọgụ a. Na isi iyi bụ legit, dịka ọmụmaatụ, di na nwunye nwere ụlọ akụ, ikpo okwu bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi. Ma, ọ bụrụ na amachaghị amaokwu a, ọ nwere ike igosi enyemaka nke inweta data n'enweghị iwu.
Ọ bụ ụdị aghụghọ nke na-eme n'ofe ụwa. Ọ na-eme mgbe mmadụ na-esite na onye ọzọ ma jiri data ya mee ihe ụfọdụ. A na-egbu ọtụtụ ime mpụ site na iji Wi-Fi ọha na eze dịka ọwa nke ịbanye nzere nbanye.
Ọ na-eme mgbe onye na-egwu ihe nchọgharị jide mpaghara nke azụmahịa gị ma na-eduzi ndị ọrụ weebụ na ntanetị dị iche iche. ụzọ na usoro nchebe netwọk.
Ngalaba na-akwụ ụgwọ na nkwụnye ego:
Ndị na-ere ahịa e-commerce na ndị ọrụ nchekwa kaadị na-arịọ maka ego tupu ịnyefee kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ego na oge ọzọ.
Ụgha njirimara ahịa:
Ụdị aghụghọ a bụ mgbe ndị omempụ na-emeghe akaụntụ ahịa na-anọchite anya nzukọ na-egosi ihe ziri ezi ma na-alaghachi n'aka kaadị akwụmụgwọ ezuru ezu. Ndị ọkachamara ahụ na-emechi ihe ndekọ ahụ tupu ndị nwe kaadị ghọta na ego ịkwụ ụgwọ.
Olee otú e si aghọ aghụghọ?
Ndị omempụ emeela ka ha zuo oke n'inweta ozi na-akwadoghị na ntanetị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị omempụ na-eme ka hà bụ ezigbo ndị nnọchiteanya na ndị na-akwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ ekwentị maka ịrịọ data. N'ikpeazụ, ha na-eji ụzọ ndị a na-esote mmekọrịta iji wepụ ozi nkeonwe.
Ntugharị malware na ngwaọrụ
Nyochaghari okporo ụzọ na saịtị na-adịghị adị
Ndị ohi na Cyber ​​na-ejikọkwa ọnụ iji nweta usoro nchebe netwọk site na ịchọta akara ma ọ bụ glitches nke na-adịghị adị n'oge. Ọnụnọ nke ọdịiche ndị a na-enyere ndị na-agba ọsọ aka inweta ozi n'ihu ụlọ firewall.
Olee otu ụlọ ọrụ azụmahịa nwere ike isi mee ka aghụghọ kwụsị?
O siri ike ikpochapu ihe ize ndụ nke aghụghọ na-ere na ụlọ ahịa azụmahịa gị. Ị nwere ike ịme ihe ndị a iji chekwaa azụmahịa gị megide ugwo ịkwụ ụgwọ:
Jikọọ aka na nkwụnye ego ịkwụ ụgwọ.
Wepụta usoro iwu na-agagharị iji nweta data dị egwu.
Na-eduzi nlele nche na ugboro ugboro site na iji ọgwụ nje virus.
Gbaa mbọ hụ na nbanye nke onye ahịa ahụ na akaụntụ nkeonwe tupu ịzụta ihe.
Gbaa mbọ hụ na a gbanwere data nbanye na akara dị iche iche mgbe niile.
Ụgwọ ịkwụ ụgwọ na-emebi gị na onye ahịa gị. Site n'iji obi ike na-echekwa ebe i-ahia gị site na aghụghọ, ị nwere ike ịmalite ịdabere na azụmahịa gị.